I-Steat iyininzi ehlukahlukeneyo ye talc, engaphendulwa yi-talc ore. Ngenye indlela, i-steatite ibizwa ngokuthi "i-wax stone", "isepha", "i-ice", kwaye ibizwa nangokuthi "zhirovik" ngenxa yobume bayo obubonakalayo. Enyanisweni, ilula ngokungaqhelekanga.
Imaminerali ingaba mhlophe, imhlophe kwaye imbala ngokugqithisa okwephuzi okanye eluhlaza. I-Red, i-cherry steatites ayinqabile. I-Steatites iyiminerali ene-silky, matte.
Umxholo weoli obonakalayo we-mineral ayikho umlinganiselo wayo kuphela. Ubuninzi beemaminerali buphakamileyo, kodwa isakhiwo ngokwazo sithe tye, kwaye ukuba sithwala i-billet, siya kushiya umkhondo. Ngendlela, banokubhalwa njenge-choki. Ukusuka kule mineral, ukuhlobisa izindlu, amancinane, inani labantu, izilwanyana zenziwe kwangoko.
"I-soap" okanye "i-ice" ngamatye ingaba i-crystalline. Igama layo libizwa ngegama lesiLatini elithi "sapo", elithetha "isepha". I-Saponite, ngokubunjwa kwayo, i-aluminosilicate yamanzi. Xa ihlambulukile, isakhiwo sayo siyathandeka kwaye sifana neoli, kwaye xa idila, iya kuba yinto ephazamisayo. I-Saponite ingaba nemibala eyahlukeneyo, imibala yayo yomthunzi ukusuka eluhlaza ukuya kumhlophe, ukusuka ebomvu ukuya kwi-blue. I-crystal ayibi, i-biaxial. Ubunzima balo buninzi malunga ne-2, 30, isalathisi sokurhafisa sisi-1, 52 (1, 48).
Iifosti. I-deposit deposits ingafumaneka, ngokuqhelekileyo, kuzo zonke i-continent. Iipolitrali eziphambili ze-mineral zikhona eFinland. IRashiya isisityebi kwiimigodi ye-steatite. Ziyakhiwa eKarlia. Iipasititi zeSaponite zifumaneka kwiCanada (iphondo le-Ontario), kwiLizard, e-USA (eMichigan), eScotland.
Izakhiwo zonyango. Abaphili bamayeza emveli kumazwe amaninzi, kuquka neFinland, bakholelwa ukuba i-steatites ingaphilisa i-radiculitis, i-sciatica, i-osteochondrosis. Basebenzisa ilitye njengomfudumala wemvelo ngenxa yokukwazi ukugcina ukushisa ixesha elide. I-Steatite isetyenziswe njenge-biostimulator ephezulu.
Ukususela kule mineralal eyenziwe lula kwaye kulula ukuyisebenzisa kwi-heaters ekhaya. Kukho uluvo lokuba ama-steat anegunya elinamandla uYan. Ubunzima bokutshatyalaliswa kwawo kufutshane nentshukumo ye-cerebral. Yiyo le propati eyindawo esekelwe ngumsebenzi wakhe njenge-biostimulator eyenziwa kulolu hlobo oluxabisekileyo.
I-chakra chakra ingaphantsi kwefuthe elibi.
Izakhiwo zobugqi. Iipropati ze-steatite zisetyenzisiwe njengezixhobo zokuvusa nokuphuhliswa kwamakhono akwi-paranormal. I-Steat ibhekwa njengelitye labaphangi kunye nama-shaman. Abaqambi banamhlanje bathi, ngokwenene, amandla omhlaba agxininisa kwixesha elifanayo njengengqondo yomntu. Kwaye ngenxa yokuba unamandla anamandla-Yan, usebenzisa iiseshoni zokucamngca. Imaminerali inokukunceda ukuphuhlisa izakhono ze-clairvoyance, i-clairaudience kunye namanye amathuba angaphezu kwamandla.
Yisiphi isibonakaliso se-Zodiac yeenkwenkwezi ixhaswa yi-steatite, abavumisi beenkwenkwezi bathi kunzima.
Iimvelaphi kunye nezipho. Ama-Steatite talismans kufuneka ukuba abo baqhube uphando, kunye nama-mediums kunye nabalunga. I-talisman ingaba ibhola okanye i-figurin encinci yesilwanyana. I-steatite talisman inceda umnini wayo ukuba asuse iingcamango ezimbi kunye neenjongo, ecacisa iingcamango kunye nezigwebo, ubonisa iimpawu zeCosmos kunye neemfihlelo zoMhlaba.
Amagada aseStatite akhusela umniniyo kwimikhosi yobumnyama. I-amulet iza kuza kuncedisa ekuqaliseni uxhulumaniso kunye nezinye ihlabathi, ihlabathi lezinto ezifihlakeleyo.
I-Steat yaziwa kwiYiputa yamandulo. Ngethuba lokucwaningwa kwezinto zakudala zokungcwatywa kwexesha loBukumkani obudala, iimveliso ezahlukahlukeneyo zifumaneka rhoqo.
Ukusetyenziswa kwe-steatite . Ukususela kumaxesha amandulo, i-steatite isetyenziswe njengezinto zokwakha kunye nezinto ezibonakalayo zokuvelisa izinto ezahlukeneyo. IiVikings zenza iintambo ze-steatite, izitsha zasekhishini, izimbiza.
I-Steat ingaba neepropati ezahlukileyo kuxhomekeke kwingingqi apho idiphozithi yayo ikhona. Ngokomzekelo, kwimimandla esenyakatho, i-steatite igxothwe, isetyenziselwa iifane kunye neendawo zomlilo. Le nto "enyakatho" ibonakala ngokuxhathisa umlilo kunye nobunzima. I-Steat yaseYurophu ayifanelekanga olo hlobo ngenxa yecala layo. Yingakho ichithwe ngenye indlela engcolileyo i-ceramic kwaye isetyenziswe njengento ekhuselayo ekwenzeni imithi. E-Afrika, e-China, e-Australia kunye naseThailand, i-steatite iveliswa ngokuhambelana ngokukhawuleza. Le ncwadana isetyenziswa kakhulu ngabadwebi bemisebenzi yabo - ukudala imisebenzi yobugcisa - imifanekiso.
EFinland, i-steatite ithathwa njenge-crystal yesizwe kwaye ibizwa ngokuthi "tulikivi", oku kuthetha "itye elitshisayo", kwaye eli gama alikho ngengozi, kuba iimaminerali ezinamanzi zinezinga eliphezulu lokumelana nokushisa. Izinto eziphathekayo ezinokuthi zilungele ukukhwabanisa: ziyakuchukumisa ngokukhawuleza, kwaye ziya kupholisa ngokukhawuleza. Ngokomzekelo, ukuba ilitye elincinci liye lahla emanzini atshisayo imizuzu emihlanu, kuya kupholisa malunga neyure. Kule propati, i-steatite iqwalaselwe ngokufanelekileyo njengomfudumalo ophezulu wendalo onikwe wona ngokwemvelo.
Izakhiwo ezifanelekileyo: i-Japanese quince
Indlela yokukhetha nokugqoka ii-lens
Microbes - abahlobo kunye neentshaba zabantu
Ukukhulelwa kwamawele kunye namawele
Yidla i-skin beauty
Indlela yokwenza isibalo slim nehle: Imithetho emine yomqeqeshi waseHollywood ithembisa ukuba yintoni umphumo!
Indlela yokukhupha izinwele kwiimilenze
Ucoceko - inkonzo entsha eya kwenza ubomi bethu bube lula
Indoda ikhupha ephupheni, oko kuthetha ntoni?
I-Psychology of recidiv, utywala